Shiinaha API 602 waalka soosaarayaasha iyo alaabada | Wadada wararka
SAARKA SOO SAARKA: Qiyaasaha: NPS 1/2 ilaa NPS2 (DN15 ilaa DN50) Range Pressure: Class 800, Class 150 ilaa Class 2500 MATERIALS: Forged (A105, A350 LF2, A182 F5, F11, F22, A182 F304 (L), F316 (L), F347, F321, F51), Daawaha 20, Monel, Inconel, Hastelloy STANDARD Naqshadeynta & soosaarka API 602, ASME B16.34, BS 5352 Iskuxirka Dhamaadka MFG-ka fool-ka-fool ah - Flange wuxuu ku egyahay ASME B16.5 - Socket Weld wuxuu ku eg yahay ASME B16.11 - Butt Weld wuxuu ku eg yahay ASME B16.25 - Dhamaadka Screwed ee ANSI / ASME B1.20.1 Tijaabada & in ...
Qiyaaso: NPS 1/2 ilaa NPS2 (DN15 ilaa DN50)
Heerka Cadaadiska: Fasalka 800, Fasalka 150 illaa Fasalka 2500
Been abuur ah (A105, A350 LF2, A182 F5, F11, F22, A182 F304 (L), F316 (L), F347, F321, F51), Daawaha 20, Monel, Inconel, Hastelloy
Naqshadeynta & soosaarka API 602, ASME B16.34, BS 5352
Waji ka waji MFG'S
Dhammaadka Xiriirka - Flange wuxuu ku egyahay ASME B16.5
1.Forged steel, Dibedda Ku marooji iyo harqood, Kacsanaanta Stem,
Buug gacmeedka aan kor u qaadin, gadaal isku dhafan,
3. Caajistay Caajis ama Deked Buuxda,
4.Socket Alxanka, dunta, Butt welded, Flanged End
5.SW, NPT, RF ama BW
Bonnet Welded iyo cadaadis shaabadaysan Bonnet, Bonnet Bonnet,
7.Soid adag, siddo Kuraasta la cusboonaysiin karo, goomaatada nabarka Sprial,
NSW API 602 globe valve, qaybta furitaanka iyo xiritaanka waalka albaabka birta ah ee foojarka ah ee bolt bolnet waa albaabka. Jihada dhaqdhaqaaqa iridda waxay ku toosan tahay jihada dareeraha. Waalka albaabka birta ah ee been-abuurka ah si buuxda ayaa loo furi karaa oo loo xidhi karaa, lamana hagaajin karo oo la xidhi karo. Albaabka waalka bireed ee birta been abuurka ah wuxuu leeyahay laba dusha sare. Labada sagxad ee shaabadaynta ee qaabka ugu caamsan ee loo yaqaan 'gate valve valve' ayaa sameeya qaab xagal ah, xagasha xagashana way ku kala duwan tahay xuduudaha waalka. Noocyada wadista ee faallooyinka albaabka birta ah ee been abuurka ah waa: buug, hawo-qabad, koronto, isku xirnaan gaas-dareere ah.
Dusha sare ee xarkaha waalka albaabka birta ah ee been-abuurka ah waxaa lagu dhejin karaa oo keliya cadaadiska dhexdhexaadka ah, taas oo ah, cadaadiska dhexdhexaadka ah waxaa loo isticmaalaa in lagu cadaadiyo dusha sare ee albaabka ilaa kursiga waalka ee dhinaca kale si loo hubiyo dusha sare ee xiritaanka, taas oo ah is-daboolid. Inta badan fureyaasha albaabka ayaa lagu qasbay inay xirmaan, taasi waa, marka waalka la xiro, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qasbo saxanka albaabka kursiga waalka xoog xoog ah si loo hubiyo in la daboolo dusha sare ee wax lagu xiro.
Albaabka waalka albaabku wuxuu si toos ah ugu socdaalaa wiishka waalka, kaas oo loo yaqaan 'wiishka wiishka wiishka' (oo sidoo kale loo yaqaan 'waalka albaabka furan'). Badanaa waxaa kujira dunta trapezoidal ee usha qaadista. Lowska wuxuu ka dhaqaaqayaa dusha sare ee waalka iyo jeexitaanka hagaha ee jirka wiishka si uu ugu beddelo dhaqaaqa wareega ah dhaqaaq qumman, taas oo ah, miisaanka hawlgalka ee riixitaanka hawlgalka.
Faa'iidooyinka waalka albaabka birta been abuurka ah
1. Diidmada dareeraha oo hooseeya.
2. Awoodda dibadda ee looga baahan yahay furitaanka iyo xiritaanka ayaa yar.
3. Jihada socodka qulqulka ee dhexdhexaadku ma xadidna.
4. Markuu si buuxda u furmo, nabaad-guurka dusha sare ee shaashadda ee dhexdhexaadiyaha shaqada ayaa ka yar kan tan adduunka.
5. Qaabku waa iska fudud yahay hawsha loo shubayna way wanaagsan tahay.
Hore: API 602 waalka waalka
Xiga: C95800 glove valve API 602
Api 602 Globe Madax
Birta been abuurka ah
API 602 qalab hubinta baastada
Welded Flange Gate Madax
A105 Xagal Xaglo
API 602 Aluminium Naxaas Albaabka Waalka